ALAOTRA : Niaka-bidy ny saribao nanomboka tamin’ny fotoana niakaran’ny voka-bary
Avo roa heny. Nanomboka tamin’ny fotoana niakaran’ny voka-bary taty Alaotra dia niaka-bidy ny saribao amin’ny gony. Avo sasaka mihitsy ny fisondrotan’ izany satria raha 5.000 ariary ka hatramin’ny 7.000 ariary izany teo aloha teo dia efa mahatratra 10.000ariary ka hatramin’ny 12.000ariary amin’izao fotoana izao. 10 juin 2011
Maro tokoa ny mivelona amin’ny asa fanamboarana saribao raha ny aty Alaotra indrindra fa amin’ny fotoam-pahavaratra. Rehefa miaka-bokatra kosa dia miasa amin’ny sehatry ny vary ny ankamaroan’ny olona ka somary mihavitsy ny manao saribao.
Tsy an-kiato ny fitrandrahana hazo hanaovana saribao noho izany, ka miharatsy ny tontolo iainana kanefa dia mbola marobe tokoa ny olona mampiasa sy mivelona amin’izany aty Alaotra. Saika efa ripaka avokoa raha ny ankamaroan’ ny ala amin’izao fotoana izao. Maromaro ihany anefa ny zana- kazo novolena tamin’ireny fotoam-pahavaratra ireny, izay natao tamin’ny toerana maro taty Alaotra Mangoro ary efa maro ihany koa no vonona hiaro ny tontolo iainana.
Mbola ezaka goavana no miandry ny rehetra mba hiarovana ny tontolo iainana satria mbola maro ihany koa ny maningana.